Ogaden News Agency (ONA) – Magaalada Jigjiga oo cabsi xoog leh ay ka muuqato
Magaalada Jigjiga oo cabsi xoog leh ay ka muuqato
Posted by ONA Admin	/ June 1, 2011
Jahawareer badan iyo cabsi siyaada ah ayaa soo foodsaartay dadka ku nool magaalada Jigjiga kadib dagaalkii faraha lagaga gubtay ee magaalada Galaalshe ay CWXO ku qaadeen. Wariyaha wakaaladda u jooga halkaa ayaa warar badanoo uu ka soo ururiyay ilo xog-ogaal ah waxay u sheegeen in maamulka gumaysiga uu dhigtay Jigjiga ay soo fool-saartay hadda cabsi heer aan horay u dhicin. Waxay dadka isla dhex marayaan in cabsida ka muuqata maamulka iyo ciidamada kala jaadka ah ay la mid tahay cabsidii ay qaadeen wakhtigii uu dhacay weeraradii dagmooyinka Dhagax-madow iyo hareeraheeda amaba heer ka cabsi sareeya.
Waxaa laga dareemahayaa dhamaan dalka oo dhan iyo guri guri magaalada Jijiga. Waxuu sheegay wariyaha in si wayn loo daad guraynhayo maleeshiyaankii Hawaarinta, booliskoodii iyo Yihaadhigtii, kuwaas oo loo daabulahayo goobihii uu jabku ka soo gaadhay iyo sidoo kale gobalka Jarar oo gabi ahaaantiiba ay ka muujinhayaa wal-walka ugu xoga badan. Marka la weydiiyo maleesiyaadka la daabulayo waxay sheeganhayaana inay ka hor tagahayaaan soo galitaanka ciidamo iyo hubab ONLF leeedahay.
Xaaladda magaalada Jigjiga ayaa aad u sii xumaatay iyadoo magaalada badhtankeeda lagu soo daynhayo maleeshiyada oo duhurnimadii dadka baadhahaya suuqa dhexdiisa qaarna ka kaxaysanhaya. Sidoo kale habeenkii 1:00 AM ee seqda dhexe ayay u dhacahayaan huteelada seexadka ee magaalada Jijiga halkaasoo ay baadhitaan ka fulinhayaan weerarkii Galaalshe intii ka dambaysay.
Magaalada Dh/buur waxaa laga dhaariyay hal gaadhi ahi inuu dhaq-dhaqaaqo noocoo dooniba ha ahaadee kuwaas oo hadii la arko la gidhaashanhayo ilaa iyo jiida hore ee dagaalka.
Dhanka kale waxay sirdoonka Itobiya sheegayaan inuu soo galeen Ogaden al-shabaab ayna ka soo galeen gobalka Goday xuduuda uu la leeyahay Soomaaliya, hasa ahaatee midan ayay kooxdii al-itixaadka ka soo xarootay ku macneeyeen inaynan jirin wax soo galay oo shabaab ahe ee iyaga un loola jeeedo sidii loo layn lahaa taasoo walwal kale ku abuurtay.
Isbadalla badan ayaa ka soo guuxaya Jigjiga ka dib markii been badan oo loo sheegay dawladda federaalka ay soo baxeen hadda isla markaana qorshayaal badan oo la dajiyay kharash xoog lehna lagu bixiyay oo la’is lahaa waxay keeni doonaan inay ONLF ku burburto ay fashilantay.
“habeenkii xortaa la gaadhey”